Newcastle oo la soo wareegtay weeraryahanka reer Brazil ee Joelinton - BBC News Somali
Newcastle oo la soo wareegtay weeraryahanka reer Brazil ee Joelinton
Image caption Tabobaraha kooxda, Steve Bruce iyo Joelinton
Kooxda Newcastle ayaa weeraryahanka Joelinton oo u safta kooxda Hoffenheim kula soo wareegtay lacag dhan 40 milyan oo Gini, waxaanu heshiisku yahay inuu lix sannadood u ciyaaro kooxda.
Ciyaartoygan reer Brazil ee 22 jirka ah wuxu noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu kooxda u keeno tabobaraha naadigaas Steve Bruce oo Arabacadii xilka kala wareegay tabobarihii hore ee kooxda Rafael Benitez.
Joelinton wuxu 35 ciyaarood oo uu u saftay Hoffenheim xili ciyaareedkii hore u dhaliyey 11 gool.
Wuxu xirfaddiisa ka soo bilaabay kooxda Sport Recife ee Brazil markii dambena sannadkii 2015-kii ayuu u wareegay dhanka Jarmalka.
Xulka Jabuuti oo xulka Soomaaliya ku karbaashay ciyaar saaxibtinimo
Qandaraaskan ciyaartoygu la saxeexday kooxdu wuxu jabiyey rikoodhkii hore ugu yaallay kooxda oo ahaa 20 milyan oo Gini oo ay kooxdu kagala soo wareegtay naadiga Atlanta United ciyaartoyga Migeul Almiron bishii Jeeniweri ee sannadkan.
"Aad baan ugu faraxsanahay in aan halkan imaad" ayuu yidhi Joelinton oo lambarka sagaalaad kooxda uga ciyaari doonaa. "Waan ogahay in ay masuuliyad culus tahay, ciyaaryahankii weynaa ee Alan Shearer, oo ah nin ay kooxdu ku dhaadato ayaa xidhan jiray lamabarkan, waanan ogahay in ay masuuliyad weyn tahay laakiin diyaar baan u ahay" ayuu yidhi.
Tabobaraha kooxda Steve Bruce ayaa isna yidhi "Inankan yar waxa ku soo socda wakhti xiiso badan, waa ciyaartoy da' yar annaguna sidaa aad aragtaan ba aad baanu ugu faraxsannahay in uu nagu soo biiro. Muddo ayaa wadahadalku socday markaa in aanu helnaa waa wax dhammaantayo aanu ku faraxsannahay."
"Wuxu leeyahay sifo kasta oo ciyaartoy casri ah looga baahanyahay. Waa nin dheer, xoog ah oo firfircoon iyo dabcan da'diisa oo aan weynayn taasina waa arin kale oo aad u muhiim ah" ayuu hadalkiisii ku gabogabeeyey Bruce.